Blog Abavelisi, Suppliers | China Blog Factory
Yintoni ekufuneka uyenze xa ufumana i ngeharika hay ??
ngomphathi ku 18-08-02
Le Model 2500 ingasetyenziswa kwiitrektara ngenxa 18-50hp 1 Kuqala ncamathela indibano eziphambili koqiniso ngongoma zintathu. Xa ufaka uvote tivekiki, qiniseka ukuba iibheringi ngaphakathi naLindiili kwicala emazantsi uvote hub.The tivekiki oxhulumene kusetyenziswa iibholiti ezine. 2 Qinisekisa ukuba tines are ...
Ngaphambi kokuba isebenze le baler mini ngeenxa zonke, kufuneka ukuba wenze ntoni ??
Kukho ezinye izinto ukwenza phambi kokuba isebenze le baler mini ngeenxa zonke. 1 Qhoboshela baler ukuya koqiniso ngongoma zintathu. Oku kuzakuvumela ukuba yonyuse ukuhambisa baler ngelixa esenza ibandla. 2 Kuya kufuneka ukufumana iindawo egcinwe ngaphakathi gumbi baler. Ukubuyisa iindawo, susa ...